Isihluku kuqothwa abangani ngenhlamvu | News24
Isihluku kuqothwa abangani ngenhlamvu
USUKU lwenjabulo lwabagani luphele kudindileze izidumbu endaweni yaseTaylors Halt ngoLwesithathu olwedlule ebusuku mhla zingama-30 kuNhlaba (May).
Lokhu kulandela ngemuva kokuba kudutshulwe endaweni yaseTaylors uMnu Mncedisi Zulu, wakuyona lendawo kanye noLindo Basi wasendaweni yaseShowe.
Ngokuthola kwe-Echo ngomunye owayekhona ngesikhathi kwenzeka lesigameko kodwa yena wasinda, nongathandanga ukuba kudalulwe igama lakhe, uthe babehleli endlini lapho kwakuhlala kuyona uMnu Zulu. Uthe bekuyinto abayijwayele vele ukuthi bahlanganele kule ndlu uma ngabe bezihlalele njengabangani. “Bekuwusuku nje olwejwayelekile olufana nezinye sijabulile sihleli sonke ngesikhathi sizwa umuntu wesifazane engqongqoza emnyango. Sabuza ukuthi ubani lowo wathi kukhona abantu abafuna uMnce [Mncedisi Zulu], wabe esesukuma uMnce eyovula umnyango.
“Ngesikhathi sonke sibheke emnyango sifuna ukubona ukuthi kungabe obani laba abafuna uMnce ebusuku, kwavele kwagulukudela abesilisa ababili bathatha intombazane bayidonsa bayikhiphela emnyango. Ayikho into abayikhuluma bavele bavulela ngenhlamvu bebhekise kuyena uMnce kwaze kwaba uyawa bemudubula ngisho eselele phansi,” kuchaza yena.
Uthe ngesikhathi kwenzeka sonke lesi sigameko yena kanye nabanye abangani bakhe babekhona bebuka ingekho into abazoyenza, kanti abanye bazama ukuphuma ngamawindi, abanye bacasha ngaphansi kombhede.
UMnu Basi yena kuthi wadutshulwa esethi uyabaleka ngemuva kokuba ephume ngaphansi kombhede lapho ayecashe khona.
“Badubula kwaze kwaba kuphela izinhlamvu bakhipha ezinye bazifaka nokuyilapho ke mina engathola khona ithuba lokuthi nami ngikwazi ukubaleka ngesikhathi besafaka ezinye izinhlamvu.
“Angikaze ngiyibone into enjeya, namanje ngisathukile. Njalo uma ngicabanga indlela engisinde ngayo kuvele kube sengathi ngiyaphupha kukhona umuntu osazongivusa athi ngiyaphupha. Sisadidekile ukuthi kungabe yini eholele ekutheni baze bamudubule bamubulale ngesihluku esingaka uMnce kuze kugcine sekulimala nabanye abantu abangazi lutho.”
Ngesikhathi i-Echo ihambele kulendawo ifice abanye abangani bakaMnu Zulu noBasi besakhungathekile ngaphandle kwayo lendlu. Igazi belisagcwele indlu kanti elinye belibonakala ngaphandle lapho kade kubaleka khona labo abathole amachaphazelo.
Omunye okhulume ne-Echo, kodwa wangathanda ukuba kudalulwe igama lakhe, uthe naye usathukile ngoba lesi sigameko sicishe senzeka ekhona naye.
“Ngihambile mina ngabashiya ngaya ekhaya kodwa bengiwumuntu ozobuyela ayohlala nabo. Ngesikhathi sekumele ngibuyele ngivele ngaba nesibhocobhoco ngavele ngalala ngangabe ngisahamba. Ngibe sengizwa ebusuku ukuthi sekungene abantu baqotha ngenhlamvu,” kubeka yena.
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlou uSergeant Mthokozisi Ngobese usiqinisekisile isigameko. “Amaphoyisa aphenya amacala okubulala kodwa bekungakaboshwa muntu.Imbangela yokudutshulwa ayikaziwa, ” kusho yena
“Ngesikhathi sifuna ukubona ukuthi kungabe obani laba abafuna uMnce ebusuku, kwavele kwagulukudela abesilisa ababili bathatha intombazane bayidonsa bayikhiphela emnyango.
Ayikho into abayikhuluma bavele bavulela ngenhlamvu bebhekise kuyena uMnce kwaze kwaba uyawa bemudubula ngisho eselele phansi